mardi, 10 septembre 2019 21:02
Vatsim-pianarana CRBC: Tonga any Xi'an ireo mpianatra malagasy 15 mianadahy handalina momba ny asa vaventy
Tonga soa amantsara ao Xi'an renivohitry ny faritanin’i Shaanxi any Chine ireo mpianatra malagasy 15 mianadahy, nahazo vatsim-pianarana handrato fahaizana any an-toerana.
Mpianatra avy amin'ny polyteknika Vontovorona sy IST izy ireo, ary haharitra dimy taona ny fianarany any Chine, amin'ny lalam-piofanana injenieran'ny Asa Vaventy, araka ny vatsim-pianarana nomen'ny orinasa China Road and Bridge Corporation (CRBC) azy ireo, tamin'ny alalan'ny ministeran'ny Fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny Asa Vaventy.
mardi, 10 septembre 2019 20:52
Omer Beriziky: Naveriny ny tranom-panjakana nipetrahany
Naverin’ny Praiminisitra teo aloha Jean Omer Beriziky, androany, amin’ny fanjakana ny tranom-panjakana izay nitoerany teo Ambodirotra – route Circulaire, Antananarivo.
Araka ny didim-panjakana laharana 2016-075, tamin’ny 04 febroary 2016, dia tokony hiala amin’ny tranom-panjakana, enim-bolana taorian’ny fiafaran’ny fotoam-piasany, ireo lehiben’ny Andrim-panjakana toy ny Praiminisitra, ny Filohan’ny Antenimieran-doholona, ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena ary ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana.
Ny ministeran’ny fitantanam-bola no mitantana ireo tranom-panjakana ireo.
Jean Omer Beriziky dia Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta tamin’ny tetezamita iraisana teo anelanelan’ny taona 2011 sy 2014.
mardi, 10 septembre 2019 20:45
Filoha Andry Rajoelina: Maniry hanangana « Fondation »
Naka ny hevitry ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny filohan’ny Repoblika, raha mifanaraka amin’ny Andininy faha-49 ao amin’ny Lalampanorenana ny fananganana « Fondation », izay rafitra tohanan’ny olontsotra tsara sitrapo na orinasa manao tolo-tanana hanaovana asa soa ho an’ny daholobe.
Voaray ao amin’ny firaketan’ny HCC ny 6 septambra 2019, nifanojo indrindra tamin’ny andro nanombohan'ny fitsidihana Apostolika nataon’ny Papa Ray Masina Fransoa teto Madagasikara, io taratasin’ny filohan’ny Repoblika io.
Ny Andininy faha-49 amin’ny Lalampanorenanana dia milaza fa « Ny asan’ny Filohan’ny Repoblika dia tsy azo ampirafesina aminà asampanjakana nahavoafidim-bahoaka, asa aman-draharaha hafa, asa ao anatin’ny antoko politika, vondrona politika, na fikambanana, ary fisahanana andraikitra eo anivon’ny fikambanampivavahana.
Izay rehetra fandikana ireo fepetra voalazan’ity andininy ity, voamarin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, dia zary ho antony amin’ny tsy fahafahana miasa tanteraka ho an’ny Filohan’ny Repoblika ».
Fifidianana: 158 hatreto no isan’ny taratasy firotsahan-kofidiana Ben’ny tanàna voarain'ny OVEC
Araka ny didy aman-dalana mifehy ny fifidianana dia hifarana ny alakamisy 12 septambra 2019 ho avy izao ny fametrahana ny antotan-taratasy firotsahan-kofidiana Ben’ny tanàna sy Mpanolontsainan’ny tanàna manerana an’i Madagasikara voaray eny anivon'ny OVEC manerana ny Nosy.
Araka ny fanazavana nomen’i Andriamanantsoa Philibert Hervé, Filoha lefitra eo anivon’ny CENI nandritra ny tafa niarahana tamin’ny mpanao gazety androany tolakandro, dia 158 no isan’ny taratasy firotsahan-kofidiana Ben’ny tanàna voaray amin’ireo Kaominina 1695 manerana an’i Madagasikara, ary 52 kosa no isan’ny antontan-taratasy firotsahan-kofidiana ho an’ny Mpanolontsainan’ny tanàna manerana an’i Madagasikara.
mardi, 10 septembre 2019 15:52
Morondava: Hirotsaka hofidiana ny Ben’ny tanàna amperin’asa Kolo Frijof
Ny Ben’ny tanàna amperin’asa Kolo Frijof no atolotry ny vovonana IRD ho kandida Ben’ny tanàna eto amin’ny Kaominina ambonivohitra Morondava, renivohitry ny Faritra Menabe.
mardi, 10 septembre 2019 15:37
Soamandrakizay: Miantso vonjy ireo mpivarotra simba entana noho ny vovoka
Miantso ny fitondram-panjakana ireo mpivarotra hani-masaka teny Soamandrakizay, tamin'ny lamesa lehibe nataon'i Papa fransoa ny alahady teo, noho ny fahapotehan'ny entana vokatry ny vovoka, izay nitorajofo teny an-toerana, ka nahatonga ny fatiantoka mihoapampana tamin'izy ireo.
Ny AB EVENT moa no mpikarakara sy tompon'andraikitra voalohany tamin'ity hetsika teny Soamandrakizay ity, izay efa nanao ny fifanarahana tamin'ireo mpivarotra, ka nahatonga ny disadisa.
Mitentina eo amin'ny 600 000 ariary ny hofan'ny trano eva farany ambany, izay efa voaloa vola avokoa.
Ka miantso ny tompon'andraikitra izy ireo, mba hifampiresaka momba izao fatiantoka izao.
mardi, 10 septembre 2019 15:35
Marc Ravalomanana: Atolotry ny RMDM ho kandida Ben’ny tanàna Antananarivo Renivohitra
« Rehefa nandinika, namakafaka ary nahatsapa ny olana misy amin'ny fametrahana ny mpanohitra eto Madagasikara sy ny fanakatsakanana ny fisian'ny mpanohitra tena izy, mifanaraka amin'ny safidin'ny vahoaka sy ara-dalàna ny Rodoben'ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara (RMDM), dia manolotra ny filoha Marc Ravalomanana ho kandida Ben'ny tanàna eto Antananarivo Renivohitra ».
Alain Andriamiseza, filohan’ny antoko MCDM no nanao ny fanambarana androany tetsy amin’ny hotely Le Louvre Antaninarenina, notronin’ireo filohan’antoko samihafa mandrafitra ny vovonana RMDM.
mardi, 10 septembre 2019 09:46
« Vitrine du Vakinankaratra »: Hanasongadinana ireo vokatra mampalaza an'i Vakinankaratra
Raikitra ary hotontosaina ny 12 ka hatramin'ny 14 septambra 2019 izao ny « Vitrine du Vakinankaratra ». Andiany faha-22 ny amin’ity taona ity, izay hatao manoloana ny Gara.
200 ny tranoheva hampirantiana sy hanehoana ny vokatra mampiavaka ireo mpandray anjara isanisany avy. Tanjona, hoy ny FIOVA (Fivondronan'ny Orinasan'ny Vakinankaratra) izay mpikarakara, ny hanasongadinana ireo vokatra mampalaza an'i Vakinankaratra sy ireo faritra manodidina, izay mikendry fiaraha-miasa amin'i Vakinankaratra, ka hisy hampiranty ny vokany mandritra io hetsika io.
Ny taona 1997 no niandohan'ity hetsika ara-toekarena « Vitrine du Vakinankaratra » ity, ary mbola tsy niato hatramin'izao.